Degso TapTap APK loogu talagalay Android
Bilaash Degso loogu talagalay Android (39.20 MB)
TapTap (APK) waa dukaanka app -ka Shiinaha oo aad u adeegsan karto beddelka Google Play Store. Waxaad soo dejisan kartaa ciyaaro qurux badan oo Android ah sida PUBG, oo aan laga heli karin Dukaanka Google Play, adigoo adeegsanaya arjigan oo ciyaaraya adigoon sugin.
Dhinaca Android, waxaa jira daraasiin dukaanno iyo ikhtiyaarro APK ah oo aad ka soo dejisan karto codsiyada iyo ciyaaraha marka laga reebo Dukaanka Google Play. TapTap waa mid ka mid ah beddelka. Dukaanka App -ka Shiinaha ee TapTap wuxuu bixiyaa is -dhexgal la mid ah Dukaanka Google Play. Ciyaaraha Android ee lagu soo bandhigay hal meel, inta badan la soo dejisto ciyaaraha Android hal meel, ciyaaraha Android ee dhowaan la siidaayay hal meel… Luuqadda dalabka oo keliya ayaa ah Shiine. Taasi waa sababta ay ugu muuqato waxoogaa dhib badan jaleecada hore, laakiin soo dejinta ciyaar kasta ma aha mid aad u adag. Waqtigan xaadirka ah, waxaa faaiido leh in la wadaago macluumaadka ah in cayaaraha diyaar u ah soo dejintu ay ka yimaadaan ilo rasmi ah (sharraxaad sameeyaha).
Ciyaaraha bilaashka ah ee Android
Soo dejinta ciyaarta Android
Ciyaaraha Android soo dejisan
ciyaaro ciyaaraha android
Ciyaaraha cusub ee Android
Ciyaaraha Android ee hadda jira
Ciyaaraha halxiraalaha Android
Ciyaaraha doorka Android
ciyaaraha ficilka android
ciyaaraha badbaadada android
ciyaaraha orodka android
kulan istaraatijiyad android
Cabirka Faylka: 39.20 MB
HappyMod waa codsi qaab mod ah oo lagu rakibi karo taleefannada Android sida APK. HappyMod waa...
Transcriber waa codsi bilaash ah oo Android ah oo aad u adeegsan karto inaad ku duubto farriimaha...
TapTap (APK) waa dukaanka app -ka Shiinaha oo aad u adeegsan karto beddelka Google Play Store....
APKPure wuxuu kamid yahay boggaga ugu wanaagsan ee soo degsado APK. Codsiga Android APK waa mid ka...
Norton App Lock, sidaad magacaaga uga malayn karto, waa barnaamij aad ku xidhi karto barnaamijyada...
Haddii aad raadineyso maamule feyl oo xariif ah oo dhakhso leh si aad u maamusho feylashaada, waad...
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee taleefannada casriga ah ayaa ah inay marba marka ka...
Norton Clean waa codsi dayactir nidaam oo bilaash ah oo kaa caawinaya inaad kordhiso booska...